May 2007 ~ Hein Thet Khin Zaw
Domain Name Registration နှင့် မြန်မာ့ဓလေ့ (၄)
မနေ့တနေ့က ဖြစ်မည်ထင်သည်။ အသိတစ်ယောက်နှင့် စကားလက်ဆုံကျရင်း မြန်မာပြည်က နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းပြောဖြစ်သည်။ ထုံးဓံအတိုင်း ပြောရင် ရယ်ရင်းပေါ့။
ဒါနဲ့စကားစပ်မိရင်း domain name ကို .com.mm ဖြင့် မြန်မာပြည်တွင် ၀ယ်မည်ဆိုလျှင် ဘယ်လိုလုပ်ရသည်ကို ပြောဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ မေလ လောက် ဖြစ်မည်ထင်သည်။ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့ domain name လေးဘာလေး ၀ယ်မလား စဉ်းစားမိသည်။
ဒါနဲ့ ဒီအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွမ်းကျင်သူ အကိုတယောက်ကို မေးကြည့်မိသည်။ သူပြန်ပြောပြတော့ ကျွန်တော့်မှာ ပါးစပ်အဟောင်းသားနှင့် ဘာထပ်မေးရမည်မသိ။
အကျဉ်းချူံးရရင်တော့ ဒါတွေလုပ်ရသည်ပေါ့။ ပထမဆုံးက domain name ကို ၀ယ်ချင်တိုင်းဝယ်လို့မရ။ domain name ၀ယ်ချင်လျှင် company ရှိရမည်။ company ထောင်ရန်အတွက် ၄ လမှ ၆ လထိ ကြာနိုင်သည်။ company ရှိလျှင်လည်း domain နာမည်ကို ကြိုက်တာယူလို့မရပါတဲ့။ company နာမည်ကိုပဲယူရမယ်ဟုဆိုသည်။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေး။ ထောက်လှန်းရေးကို ဖြတ်ရသည်ဆိုပဲ။ သူတို့ဆီက လက်မှတ်လိုသည်။ နိုင်ငံရေးနှင့် ကင်းရှင်းဘာသည် ညာသည်ပေါ့။
ဒါကတော့ မြန်မာ့ "ဓလေ့" ပေါ့လေ။ အခုတော့ ဘယ်လိုနည်းစနစ်တွေ သုံးနေသည်မသိ။ အနောက်နိုင်ငံက "ဓလေ့" ကတော့ နံပါတ် ၁၉ လုံး၊ ရက်စွဲ နှစ်ခုနှင့် အချိန် ၂ မိနစ်ပေးနိုင်လျှင် domain name ၀ယ်လို့ရသည်။ domain name ၀ယ်ဘူးသူ ဒါမှာမဟုတ် online shopping လုပ်သူတွေ ဒီနံပါတ်တွေနှင့် ရက်စွဲကို သိကြသည်။
အော်... မြန်မာပြည်မှာ domain name ၀ယ်ဖို့ လိုအပ်ချက်တွေက လောလောဆယ် ၁၉ ချက်လောက်တောင်မှာ မရှိသေးတော့ နောက်ထပ်ဘာတွေ တိုးလာမလဲဆိုတာကို မိတ်ဆွေနဲ့ အတူ စဉ်းစားမိနေကြပါသေးတယ်....
မနေ့တနေ့က ဖြစ်မည်ထင်သည်။ အသိတစ်ယောက်နှင့် စကားလက်ဆုံကျရင်း မြန်မာပြည်က နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းပြောဖြစ်သည်။ ထုံးဓံအတိုင်း ပြောရင် ရယ...
အင်တာနက်၊ မြန်မာပြည် နှင့် ရိုးရာဓလေ့များ (၃)
အရင်ပို့စ်တုန်းက ၂၀၀၀-၀၁ မြန်မာပြည်ရဲ့ အင်တာနက် အခြေအနေဘယ်လိုဆိုတာ ရေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီဘလော့ခ်မှာ ရေးတင်လိုက်တဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ အဲ့တုန်...
စက်တင်ဘာ နည်းပညာအရေးအခင်း (သို့) မြန်မာပြည်က ဆိုဒ်ဘာ သူပုန်များ
စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းအတွင်း မြန်မာပြည်က ဘလောက်ဂါတွေနဲ့ သတင်းရိုက်ကူးပေးပို့ခဲ့သူတွေဘာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် အမှန်တကန်ကို အရေးပါတဲ့နေရာကနေ ပါဝင် လ...
ဘလော့ခ် ဆိုတာဘာလဲ နဲ့ မြန်မာ ဘလော့ခ်ဂါများ .... (၁)
မြန်မာတွေ တော်တော်များက ဘလော့ခ်ဆိုတာကို ဘာလဲ ဆိုတာကို မသိကြပါဘူး ... သိတဲ့သူကလည်း အတော်လေးကို ထဲထဲဝင်ဝင် သိနေကြပါတယ်... မြန်မာတွေ ရေးတဲ့ ဘ...
Our lovely backyard!
finally, long time coming gardeners came over yesterday. they took only2hours to cut the whole yard covered with2feet long grass.
World Blog Day, အင်တာနက်, မြန်မာပြည်နှင့် မြန်မာဘလော့ခ်ဂါ (၂)
ဘလော့ခ်ရေးသူတွေ စုစုစည်းစည်းနဲ့ ကမ္ဘာ့ ဘလော့ခ်နေ့မှာ မြန်မာပြည်မှာ စာအုပ်ထုပ်ဖို့ လုပ်နေကြပါတယ်။ ဘလော့ခ်ရေးသူတွေက တစ်ကမ္ဘာလုံးက မြန်မာတွေ ဖြစ...
blogger အတွက် Client Software
ဒီ ဘလော့ခ်ကို ပြန်သုံးမလို့ ဆိုပေမယ့် မြန်မာလို တစ်ခါတည်း blogger ကနေ ရေးဖို့က နည်းနည်း အခက်တွေ့နေတာမို့ client တွေလိုက်ရှာ လိုက်တာ သုံးလေး...
Copyright © Hein Thet Khin Zaw | Powered by Blogger